အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၆၆ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ အခမ်းအနားက မိန့်ခွန်းများ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၆၆ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ အခမ်းအနားက မိန့်ခွန်းများ
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဒု - ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦးရဲ့ မိန့်ခွန်း
အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မိန့်ခွန်း
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၆၆ နှစ်မြောက်မွေးနေ့ ၊ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးများနေ့တွင် ထုတ်ပြန်တဲ့ ဗဟို အမျိုးသမီးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ရဲ့ စာတမ်း Daw Aung San Suu Kyi s 66 Birthday NLD Women Statement ရန်ကုန်မြို့၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ အနောက် ရွှေဂုံတိုင်လမ်းရှိ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးတွင် ကျင်းပတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အသက် ၆၆ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ အခမ်းအနားတွင် ပြောကြားတဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဒု - ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦး၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ရဲ့ မိန့်ခွန်းများနဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟို အမျိုးသမီးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ရဲ့ စာတမ်းများကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
သတင်းနှင့်အသံ Burma Todayမှ သတင်းနှင့်အသံ Burma Todayမှ.
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 5:57 PM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook